Tag: skepticism | Martech Zone
Friday, April 16, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Robby Ogbugbu
Ekwesịrị m ikweta, mkpụrụ akwụkwọ anọ ahụ TECH nyere m ndị na-ama jijiji. Okwu a bu “uzu uzu” bu okwu na-atu ujo. Mgbe obula anyi nuru ya, anyi kwesiri itu egwu ma obu obi uto. Ọ dịkarịghị anyị na-elekwasị anya na ebumnuche nke teknụzụ: iwepụ ihe mgbagwoju anya n'ụzọ ka anyị wee nwee ike mekwuo ma nwekwuo ọ .ụ. Naanị Teknụzụ Ozi Ọ bụ ezie na okwu teknụzụ sitere n'okwu Greek téchnē, nke pụtara "nka," ndị a